श्रीमान् श्रीमतीले आफै हेर्न बनायको एस्तो भीडीयो झुकिएयर पोस्ट भएपछि – Enepali Samchar
श्रीमान् श्रीमतीले आफै हेर्न बनायको एस्तो भीडीयो झुकिएयर पोस्ट भएपछि
March 13, 2021 adminLeaveaComment on श्रीमान् श्रीमतीले आफै हेर्न बनायको एस्तो भीडीयो झुकिएयर पोस्ट भएपछि
e nepalisamchaar /आज भोली प्रबिधिले निकै ठुलो फड्को मारेको छ । यो बिशाल पृथ्वीलाई एक हातको ईसारामा हेर्ने र घुम्न सकिन्छ । आफुलाई मन लागेको कुराहरु एक स्वृचको भरमा लिन सकिन्छ ।
यही विज्ञान प्रबिधिको युगमा बिभिन्न सामाजिक सञ्वजालहरु पनि भित्रिएका छन जस्को कारणले ठुलो संसारका धेरै मान्छेहरु सँग एउटा स्मार्ट फोनको प्रयोगले हामी नजिक हुन देख्न भेट्न सक्छौ । यही सामाजिक सञ्जाल आज भोली खुल्ला मञ्च भएको छ ।
यसबाट कतिले कयौं फाईदाहरु लिएका पनि छन भने कसैको यही सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले घरवार सँगै जिन्दगी पनि बर्बाद भएको छ ।
आज भोलि का युवक युवतीहरु प्राय सबैजसोले फेसबुक यु ट्युव इन्स्टागा्रम इमो म्यासेन्जर लगायतको धेरै सामाजिक संजालको प्रयोग गरिरहन्छन । आज भोलि सामाजिक संजालको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग धेरै भैरहेको हामी सबैलाइ अवगत नै छ । हेर्नुहोस प्रेमी श्रीमान सँ’गको भिडियो ।
काठमाण्डाै – भारतीय कलाकार रुबिना दिलाइक रियालिटी शो बिग बोसको १४ औं सिजनको बिजेता बनेकी छिन् । बिजेता बनेसँगै उनले ३६ लाख भारतीय रुपैयाँ पाएकी छिन् । बिग बोसमा जानुअघि उनी टेलिसिरियलमा सक्रिय थिइन् । बिग बोसको १४ औं सिजनको फर्स्ट रनरअप राहुल वैद्य बनेका छन् । यसअघि इण्डियन आइडलको पहिलो सिजनमा पनि उनी फर्स्ट रनर अप बनेका थिए ।
‘रियालिटी शो’का होस्ट सलमान खानले विजेताको नाम घोषणा गर्नुअघि फाइनलमा पुगेका सबै प्रतियोगीबीच विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए । उनले १४ लाख भारतीय रुपैयाँ लिएर शो छोड्न सकिने बताएका थिए । प्रतियोगीलाई निर्णय गर्न ३० सेकेण्डको समय दिइएको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन निर्देश : पार्टीको निर्देश नमाने हदैसम्मको कारबाही गर्ने यस्तो छ तयारी
थाहा पाइराखौ गर्भवती महिलालाई याै न स म्बन्ध राख्ने इच्छा कति हुन्छ ?
अष्ट्रेलिया जाँदैहुनुहुन्छ ? जानुअघि जान्नैपर्ने यी १० कुरा